Global Voices teny Malagasy » Hong Kong: Donald Tsang, aza fady matesa! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Mey 2009 12:45 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Hong Kong (Shina), Shina, Fampandrosoana, Mozika, Politika, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Tezitra tamin'ny fanamarihan'i Donald Tsang  Lehiben'ny mpanatanteraka niresaka momba ilay indray 4 jona nandritra ny kabary nataony teo anoloan'ny Mpanao lalàna tamin'ny herinandro (13 mey) ny olona. Hoy ny navaliny raha nanontaniana ny heviny manokana mikasika ny hetsika fitakiana nataon'ny mpianatra tamin'ny 4 jona izy:
Azoko ny fahatsapan'ny mponin'i Hong Kong raha ny 4 jona no resahina, saingy toe-javatra efa nitranga taona maro lasa anie iny e! Efa nahitam-bokatra goavana ankehitriny sy nitondra ho any amin'ny fampivoarana ny toe-karen'i Hong Kong ny fampandrosoana ny firenena any amin'ny faritra (sehatra) maro. Mino aho fa hahay hijery ny fandrosoan'ny firenena ny vahoakan'i Hong Kong
Avy eo dia nambarany fa mahasolo ny hevitry ny olona amin'ny ankapobeny izany fomba fijeriny izany, ary io no tena niteraka ny tsikera fa tsy nofidian'ny vahoakan'i Hong Kong izy. Nandika (ho amin'ny teny anglisy) ny valin'ny fitsapan-kevitra avy ao amin'ny HKU ny vohikala ESWN ary dia navoakan'ny 58%n'ny fanehoan-kevitra fa diso ny fitondrana shinoa tamin'ny famoretana nataony tamin'ny 4 jona, na izany aza dia matoky ny ankamaroan'ny olona fa nisy fivoarana ny fanajana ny zon'olombelona nandritra ny telo taona farany. (ao amin'ny ESWN  ny antsipirian'ny tatitra sy ny valin'ny fanatsafana ny hevitry ny olona)
Tahaka ny ahoana moa ny fahatezeran'ny olona tamin'ny fanehoan'i Donald Tsang ny heviny? Mampiharihary ny fihetseham-pon'ny olona izay nahazo mpijery mihoatra ny 30 000 nandritra ny faran'ny herinandro monja ity raki-kira an-tsary mitondra ny lohateny hoe Donald Tsang, Please Die,(Donald Tsang, aza fady matesa) ity:
Donald Tsang, aza fady matesa
我哋實上街 (dika: tapakevitra izahay hidina an-dalambe)
Oviana ianao no ho voaroaka?
Hevero ry Donald ny tananao nisy nanapaka tarangana
Roapolo taona taty aoriana dia lasa filohan'ny mpanatanteraka ny olona iray
Hitsahatra tsy hitady ny rariny ve ianao noho ny zava-bitany?
Ka izany no hijanonanao tsy hitory hanjakan'ny fahamarinana?
fadiranovana avokoa izahay rehetra
Tsy dia nahavita azy i Tung Chee Hwa  (Lehiben'ny mpanatanteraka teo aloha)
Saingy manam-panahy kokoa noho ianao.
Inona ny vitanao nandritra ny fitondranao
Moa ve ny fanamafisana ny demaokrasia tadiavin'ny olona.
Oviana ianao no ho faty
Nosoratan'i Ah P avy amin'ny tarika antsoina hoe “my little airport” ity hira ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/18/2319/
 Donald Tsang: http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Tsang
 Tung Chee Hwa: http://en.wikipedia.org/wiki/Tung_Chee_Hwa